Hordhac: Man United vs Southampton – Red Devils Oo Kaalinta 3aad Imanaysa Iyo Haddii Solskjaer Ka Babdaadi Karo Inkaarta Saints - Gool24.Net
Hordhac: Man United vs Southampton – Red Devils Oo Kaalinta 3aad Imanaysa Iyo Haddii Solskjaer Ka Babdaadi Karo Inkaarta Saints
Manchester United ayaa garoonkeeda Old Trafford kusoo dhoweynaysa Southampton, waxaanay si buuxda ugu fadhiisan doonaan kaalinta saddexaad ee horyaalka Premier League, haddii ay guuleystaan.
Red Devils oo bandhig layaab leh samaynaysay intii uu horyaalku dib u bilaabmay, waxay ku jiraan kaalinta shanaad, laakiin waxay kasoo dulboodi doonaan Leicester City oo iska lumisay fursad ay booska saddexaad ku iman lahayd kaddib markii ay Bournemouth guul-darro xanuun badan gaadhsiisay Axaddii iyo Chelsea oo 3-0 ay Sheffield United ku garaacday Sabtidii.
Man United Vs Sheffiled United
17 ciyaarood oo xidhiidh ah oo aan laga badin kaddib, waxay United dareemaysaa neecowda midhaha natiijooyinka wanaagsan ee ay soo gaadhayeen, waxaanay kaalinta saddexaad ee ay sida adag ugu soo dagaallameen ay soo fadhiisanayaan xilli saddex ciyaarood oo kali ahi ka hadheen dhamaadka xili ciyaareedka.
Red Devils oo sidoo kale haysata fursad kale oo ay ku iman karto Champions League haddii ay kaalinta shanaad ee Premier League ku dhamaysato, waxay u baahan tahay inay ku guuleysato tartanka Europa League oo ay tahay kooxda ugu cadcad ee ku jirta, waxaana haddii ay koobka hanato ay si toos ah u tegi doontaa UEFA Champions League.
United ayaa mar hore iska lumisay fursad ay Chelsea ku dhaafi lahayd markii ay barbarraha la gashay Tottenham Hotspur June 19, laakiin waxay intii ka dambaysay gaadheen afar guulood oo xidhiidh ah iyagoo min saddex gool iyo ka badan ka dhaliyey Sheffield United, Sheffield United, Brighton & Hove Albion, Bournemouth iyo Aston Villa.
Marka ay kala dhamaadaan Southampton, Manchester United waxay isku diyaarin doontaa saddexda ciyaarood ee u hadhay oo ay foodda is dari doonaan Crystal Palace, West Ham United iyo Leicester.
Ole Gunnar Solskjaer waxa kale oo uu haddaba sii dejinayaa taatikada uu kula ciyaari lahaa Chelsea oo ay Semi-finalka FA Cup iskaga hor iman doonaan Axadda usbuuca soo socda.
Lixdii ciyaarood ee ugu dambeeyey Manchester United waxay kasoo hehay 15 dhibcood iyagoo soo diiwaan-gashaday shan guulood iyo ciyaar ay barbar-dhac galeen.
Southampton ayaa dhinaceeda fiicnayd kulamadeedii ugu dambeeyey, waxaana saddexdii ciyaarood ee ugu dambeeyey ay soo heleen toddoba dhibcood, ciyaartoodii ugu dambaysayna waxay barbarro 1-1 ah la galeen Everton. Waxa uga sii horreeyey laba guulood oo ay ka gaadheen Manchester City oo ay 1-0 ku garaaceen iyo Watford oo ay 3-1 u dhiibeen iyagoo waliba marti ahaa.
Southampton oo kaalinta 12aad kaga jirta horyaalka, lixdii ciyaarood ee ugud ambeeyey waxay soo heshay 10 dhibcood oo ahaa saddex guulood, mid barbarro ah iyo ciyaar laga badiyey.
Ciyaarta: Manchester United vs Southampton
Solskjaer waxa uu afartii ciyaarood ee ugu dambeeyey kusoo galay garoonka shax isku mid ah oo aanu waxba ka beddelin, waxaanay afartaba gaadheen guulo waaweyn.
Tababaraha reer Norway oo u muuqda inuu helay safkiisa koowaad oo uu aaminay 11ka ciyaartoy ee uu lasoo shir-tegay afarta maalmood ee xidhiidhka ah ee ay kooxdiisu dhalisay min saddex gool iyo ka badan, ma jiraan wax dhaawacyo ah oo ku yimid oo sabab u noqon kara inuu kala daadiyo kulanka caawa.
Axel Tuanzebe iyo Phil Jones ayaa ah labada ciyaartoy ee kaliya ee Manchester United dhaawaca ka ah, laakiin kooxda ayaa sideeda kale taam ah.
18 jirka Mason Greenwood oo afka hore ay saddexlay halis ah ka wada abuureen Marcus Rashford iyo Anthony Martial, ayaa rajaynaya inuu mar kale rikoodhkiisa goolasha sii wato, laakiin waxa culays ka saaran yahay tababaraha khadka dhexe oo ay McTominay iyo Fred ku cadaadinayaan inuu boos ka siiyo, isla markaana uu Nemanja Matic oo si cajiib ah u ciyaarayay kaydka soo dhigo.
Southampton ayay dhibaato dhinaca dhaawacyada ahi haystaan, waxaana dhaawac kaga maqan Sofiane Boufal, Yan Valery, Nathan Tella iyo Moussa Djenepo, halka Jannik Vestergaard oo dhaawaciisu ka sahlan yahay kuwa kale, kana cabanaya muruqa uu shaki ku jiro haddii la ciyaarsiin doono.